Aseqalile ukusebenza amanye amatekisi eThekwini | News24
Aseqalile ukusebenza amanye amatekisi eThekwini
Durban - Aseqalile ukusebenza amanye amatekisi eningizimu yeTheku ngemuva kokuvala imigwaqo emikhulu eThekwini ngoLwesithathu ekuseni.
Yize kunjalo, amaphoyisa axwayise abashayeli ukuba basebenzise eminye imizila ezindaweni okusavalwe kuyo imigwaqo.
ULieutenant-colonel Thulani Zwane uthe amatekisi avale imigwaqo engaku-N2 eduzane naseProspecton eduzane nakwaToyota okuyilapho okukhiqizwa khona amatekisi ohlobo lwe-Toyota Quantum.
OLUNYE UDABA: Abamatekisi bavale imigwaqo eThekwini bekhala ngamanani
"Amaphoyisa asiqaphile isimo," kusho uZwane.
EMlazi kuMaurice Gumede Drive, abashayeli bamatekisi bavale imigwaqo ngamathayi avuthayo nangemfucuza.
La bashayeli bebephinde bajikijele ngamatshe izimoto ezidlulayo.
Abanye abafundi nabasebenzi baphazamisekile ngenxa yalesi siteleka esiqale phakathi kwamabili.
Bekungakacaci noma osomatekisi sebezidlulisile yini izikhalo zabo kubaphathi bakwa-Toyota.
Ngokusho kwemibiko, iSouth African Taxi Association ikhethe ukungenela isiteleka ngenxa yokukhuphuka kwenani okuthengiswa ngalo amatekisi ohlobo lwe-Toyota Quantum selokhu athulwa kuleli eminyakeni engu-10 eyedlule.
Osomatekisis bathi ngesikhathi efika lawa matekisi kuleli, ayebiza u-R220 000 ekubeni ayakhiwa ngaphandle – kodwa manje asebiza u-R450 000 ngaphambi kwenzalo nakuba esekhiqizwa kuleli, nokwenza le mboni ibone sengathi kudlalwa ngayo.